Raiso amin'ny teniny Andriamanitra!
"Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy." Romana 10:17
"Sao tsy nahare izy? Tsia; fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony, ary ny teniny hatramin'ny faran'izao rehetra izao." Romana 10:18
Ny fanambaran'ny Baiboly dia avy amin'Andriamanitra, ary natao ho antsika tsirairay. Indreto misy vitsivitsy amin'izany:
- Ao anaty toerana tsy ahitana fanantenana ny olombelona: "Tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana,satria samy efa nanota izy rehetra" (Romana 5:12).
- Andriamanitra aloha no nanapa-kevitra ny ho tia azy: "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana" (Jaona 3:16).
- Nanao sorona ny tenany Jesosy Kristy: "Iray no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, Izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny olona rehetra" (1 Timoty 2:5,6).
- Manolotra famonjena ho an'ny olona Andriamanitra: "Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe...; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio... dia Kristy Tompo" (Lioka 2:10,11)
- Lazainy aminy ny fomba ahazoana izany: "Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao" (Asan'ny Apostoly 16:31).
- Ny finoana dia mandray ny famelan-keloka: "Ary hoy izy: Tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy" (Jaona 9:38).
- Ny mpino dia misaotra sy mitsaoka: "Ho an'Izay tia antsika (Jesosy Kristy) ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany... ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay." (Apokalypsy 1:5,6).